वस्तु विनिमय बजार : कानूनी दायरामा ल्याइँदै | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर वस्तु विनिमय बजार : कानूनी दायरामा ल्याइँदै
वस्तु विनिमय बजार : कानूनी दायरामा ल्याइँदै
काठमाडौं । शनिवारदेखि कार्यान्वयनमा आएको वस्तु विनिमय बजार नियमावली, २०७४ लाई व्यवस्थित र नियमन गरी धितोपत्र बोर्डले यो व्यवसायलाई कानूनको दायरामा ल्याउने भएको छ । सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती भने रहेको बताए ।
नियमावलीको व्यवस्थासँगै हाल सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी एक्सचेञ्जहरूले नयाँ करारको कारोबार गर्न नपाउने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेका कमोडिटी एक्सचेञ्जहरूले निश्चित अवधि कायम रहेको करार उपकरणको मात्र कारोबार गर्न पाउँछन् । तर, यो कानूनी व्यवस्थासँगै नयाँ करार जारी गर्न र कारोबार गर्न भने बन्देज लगाइएको छ ।
बोर्डले यस्तो कानूनी प्रावधान ल्याउनुअघि वस्तु विनिमय बजारको अध्ययन अनुसन्धान गरे पनि हाल कति सञ्चालनमा रहेका छन् भन्नेबारे भने यकीन तथ्याङ्क नभएको बताएको छ ।
यद्यपि हाल सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी व्यवसाय करीब १५ ओटा र दर्ता भएका सातओटा रहेको कार्यकारी निर्देशक गिरीको भनाइ छ । हाल जेजस्तो हिसाबले सञ्चालनमा आए पनि अब उक्त बजारलाई कानूनी दायरामा आउन यो प्रावधानलाई अनिवार्य रूपमा अपनाउनु पर्नेमा बोर्डले जोड दिएको छ ।
नियमावलीमा कमोडिटीबारे धेरै व्यवस्था गरिए पनि अनिवार्य रूपमा चुक्तापूँजी पुर्‍याएर आएका कम्पनीले मात्र दर्ता गरेर आधिकारिक रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने छन् । यसअन्तर्गत वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने सङ्गठित संस्थाको चुक्तापूँजी रू. ५० करोड हुनुपर्ने छ ।
यसैगरी वेयर हाउसको रू. १५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डका अध्यक्ष कार्कीले नेपालमा वेयर हाउसका लागि पनि छुट्टै कानूनी व्यवस्था जरुरी भएको बताए ।
वेयर हाउसमा पनि धेरै लगानी र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी राफसाफ तथा फर्छ्योट व्यवसायको रू. ७ करोड चुक्तापूँजी हुनुपर्ने छ भने लगानी व्यवस्थापकको रू. ५ करोड हुनुपर्ने छ । यस्तै, लगानी परामर्शदाताको रू. १ करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको रू. ५० लाख न्यूनतम चुक्तापूँजी हुनुपर्ने छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार अब यससम्बन्धी कारोबार गर्दा सीमित वस्तुको मात्र गर्न पाइने छ । तर, बोर्डलाई आवश्यकताअनुसार थप गर्न सक्ने अधिकार भने दिइएको छ ।
ऐन, नियमावली तथा बोर्डले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा कारोबार रोक, अनुमतिपत्र निलम्बन, खारेजी, बिगोबमोजिम वा रू. १० लाखसम्म जरीवाना वा ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । वस्तु विनिमय बजार नियमावली २०७४ लागू भई कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको वस्तु विनिमय बजार स्पष्ट रूपमा नियमन दायराभित्र प्रवेश गर्ने बताइएको छ । यसबाट बजार नियमित, व्यवस्थित, विश्वसनीय, स्वच्छ, तथा पारदर्शी भई लगानीकर्तालाई लगानी विविधीकरणका लागि नयाँ क्षेत्र खुल्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।
कारोबार गर्न सकिने वस्तुको सूची
कृषिजन्य उत्पादन : कपास, अलैंची, जिरा, खुर्सानी, मरिच, काजु, सुपारी, दलहन, मकै, गहुँ, धान, आलु, मेथी, तोरी, भटमास, आलस, फापर, उखु, सुर्ती, जूट, अदुवा, बेसार, फलफूल तथा सोबाट निर्मित जूस ।
धातुजन्य वस्तु : आल्मुनियम, तामा, शिशा, निकल, टिन, पित्तल, फलाम, स्टिल, जिङ्क ।
बहुमूल्य धातु : सुन, चाँदी, प्लाटिनम ।
खनिज तेलजन्य वस्तु : कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, हिटिङ आयल ।
तेल : नरिवलको तेल, पाम तेल, तोरीको तेल, भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल, आलसको तेल ।
अन्य : चिनी, सख्खर, चिया, कफी, अण्डा, जडीबुटी ।